Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – Fubi Rai – A talent underappreciated
Writes : शिव मुखिया
सय वर्ष बूढो चियाको बोट, छेवैमा चियाको टोकरी बोकिरहेकी वृद्धा, अर्कोतिर च्याब्रुङ तालमा कम्मर मर्काइरहेका युवा।
भारतको दार्जीलिङ, मिरिक बजारस्थित एउटा फ्ल्याटमा फोबी राई यही संसारमा बाँचिरहेका छन्। तर, राईको संसार वास्तविक होइन, कलाकृतिमा आधारित छ। यी सबै उनैले बनाएका कलाकृतिका पात्र हुन्।
“त्यो रुखको ठुटाहरूमा म त राम्रो, राम्रो आकृति पो देख्छु”, दार्जीलिङे ‘टोन’ मा राई भन्छन्। कतै मिल्काइएका काठका टुक्रा हुन् वा बेवारिसे ठुटा, राई त्यसलाई कुनै न कुनै रुप दिन हतारिन्छन्।
अन्ततः त्यसले अनेकन भावभंगीका मानव आकृति ग्रहण गर्छन्। आदिम सभ्यता झल्कने यस्तै आकृतिले राईको बैठकलाई संग्रहालय झै बनाएको छ, जहाँ धनुष बाण धारण गरेका होचा कदका किराती राजा यलम्बरदेखि डम्फुको सेलो तालमा मच्चिरहेका तामाङ ठिटोसम्म उपस्थित छन्।
“तपाईं यसलाई निर्जीव देख्नुहोला” दार्शनिक पारामा राई भन्छन्, “तर, म कुनैमा बोजुको अनुहार देख्छु, कुनैमा बगानमा काम गर्ने बडाको। ”उनी आफ्नो मानव आकृतिलाई परिवेश र सभ्यताको साक्षी बनाउन चाहन्छन्।
राईको कलाको चेतना राजनीतिसँग गाँसिएको छ। सुवास घिसिङ नेतृत्वको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किरहेका बेला राई सानै थिए। त्यही आन्दोलनले उनमा आफ्नो माटो र अस्तित्वबोध गरायो। लाग्यो, “हामी हेपिएका छौं, थिचिएका छौं।”
त्यसपछि नै हो, उनले छिनो र हथौडाले तिनै हेपिएका र थिचिएका हरूको अनुहार कुँद्न थालेको। तर, हस्तकलाबाट मात्र राईको चित्त अघाएन। १६ वर्षको उमेरदेखि उनी गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै कहिले सडकमा त कहिले भूमिगत आन्दोलनमा होमिए। पढाइ छुट्यो, ‘करिअर’ भताभुङ्ग भयो। “कुनै दिन त गोर्खाल्यान्ड प्राप्त हुन्छ, हुन्छ” यही दृढताले आजपर्यन्त उनी राजनीतिमा सक्रिय छन्।
“अब गान्धीवादी आन्दोलनबाटै गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्ने लडाइँमा छौं” गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशनका सभासद् समेत रहेका राई भन्छन्, “पहिलेको जस्तो हिंसात्मक हुँदैन।”
धेरैले सोध्दा रहेछन्, “यति राम्रो सीप भएको मान्छे किन राजनीतिमा लागेको?” उनी जवाफ फर्काउँछन्, “म राजनीति र कला दुवैमा स्वतन्त्रता खोजिरहेको हुन्छु।” सय वर्ष पुरानो चियाको बुट्यानलाई उनी दार्जीलिङवासी गोर्खालीको पीडाको बिम्ब ठान्छन्।
“यो बुट्यानलाई कहिल्यै हुर्कन दिइएन। यसलाई काटेर, छाँटेर कलिलो मुना चिमोटियो। यसका गाँठा, बाङ्गाटिङ्गा हाँगाहरू ज्वालामुखी झै उम्लन खोजिरहेका छन्”, उनी भन्छन्।
राईको घरभरि कलाकृतिसँगै सम्मान पत्र, ट्रफी सजाइएका छन्। उनी आफ्ना कलाकृति प्रदर्शन त गर्छन्, तर बिक्री गर्दैनन्। उनी ढुक्क छन्, एकदिन गोर्खाल्यान्ड प्राप्त भएरै छाड्छ। र, त्यही सुखद् बिहानी उनले आफ्नो संग्रहालयको घुम्टो उघार्ने छन्।
112,560 total views, 1 views today
Abhishek Gurung with Indus Creed Duncans Promise to Reopen Abandoned Tea Gardens by March 2017
Meet Aqui Thami from Darjeeling, whose...
Dec 19, 2017 Comments Off on बलिउडमा सह-निर्देशकको काम गर्दै मिरिककी अनुग्रह बान्तावा
Faces in Our Midst – Bebaychna...
Dec 07, 2017 Comments Off on Faces in Our Midst – Bebaychna charting her own course
Nisha Bhujel – Compassion...
Sep 10, 2017 Comments Off on Nisha Bhujel – Compassion personified
237,562 total views, 204 views today
267,084 total views, 204 views today
283,314 total views, 204 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 283,331 total views, 204 views today Comments comments
283,331 total views, 204 views today
283,253 total views, 204 views today